Marshmallow isiraphu - umkhiqizo esiyingqayizivele ezingasiza ekwelapheni izifo eziningi. Ukupheka usebenzisa izimpande lateral, ngaphambili bahlanza kusuka isendlalelo engenhla. izinto zokusetshenziswa Vegetable kuvuna entwasahlobo noma ekwindla. Izimpande abe iphunga eliyingqayizivele futhi kancane elimnandi kanye ukunambitheka. Ngokuba ukulungiswa yemithi esetshenziswayo futhi izimbali namaqabunga alesi simila.
Marshmallow Kuyaziwa futhi sekuyisikhathi eside yasetshenziswa ekwelapheni iziguli. Decoction, ukumnika noma Marshmallow isiraphu uyakwazi ukwehlisa ukuvuvukala futhi unciphise ukuvuselelwa okuzenzakalelayo kwezicubu ezilimele. Imithi zalesi sitshalo esimangalisayo ukuthambisa qwembe emphinjeni kanye angina futhi unikele umphumela omuhle expectorant. Lombhalo ucashunwe ebhukwini aqueous lwebhece impande usizo nge anda asidi yesisu, kolwelwesi, izilonda futhi enterocolitis. Ukuthola ngaphakathi, umuthi umboza futhi ivikela mucosa yokusetshenziswa pheshana emathunjini. I acid ngaphezulu ikhishwe, aba maningi viscosity umuthi.
Kuvele ukumnika yakhiwa ngamahlamvu kanye hibiscus izimbali, isetshenziswa ngendlela enemas e uhudo. Kungaba ukwelapha conjunctivitis futhi ngeke nethonya elihle ku pleurisy, inyumoniya, ukukhwehlela futhi izifo kohlelo urogenital whooping. Marshmallow isiraphu itholakala imithi eminingi ukhwehlela. It hhayi kuphela ithuthukisa imiphumela yabo emzimbeni womuntu, kodwa futhi upholisa ulwelwesi lwamafinyila yaleli pheshana emathunjini.
Indlela yokwenza lwebhece isiraphu?
Inkambo yokwelashwa isuka kuzinsuku 10 kuya ku-15. Lokhu kulandelwa ikhefu. Marshmallow isiraphu kufanele buhlanjululwe ngamanzi abilisiwe. Isizathu salokhu siwukuthi yonke isipuni zomuthi liyadingeka ukuthatha amagremu amahlanu amanzi. Umthamo incike yobudala isiguli. Izingane ngemuva kweminyaka engu-12 kanye neziguli omdala zidinga ukuphuziswa eyodwa isipuni reception ngamunye izikhathi 4-5 emini.
Izingane ezisafunda amabanga aphansi yobudala (iminyaka 6-12), kanye nobuningi efanayo kufanele uthathe okukodwa isipuni. Izingane kuze iminyaka 6 ziphuze isiraphu lwebhece hhayi ningi than kwengxenye isipuni ngesikhathi. Leli thuluzi ingase ikhishwe ngesikhathi sokukhulelwa futhi ibele. Izimo ethola osebenza isici esiyingqayizivele lwebhece kuphela.
Abantu abalandela ukudla nge carbohydrate ongaphakeme, iziguli sikashukela kufanele zithathwe nge okukhulu ukunakekelwa isiraphu lwebhece. Izingane kuze kube unyaka, lapho ukhwehlela, ungakwazi ukunikeza izidakamizwa, ngaphambili buhlanjululwe amanzi amaningi. Ngaphambi kokusebenzisa izidakamizwa, ikakhulukazi ekwelapheni izingane kuba isibopho kokubonisana wezingane.
Amalungiselelo we lwebhece kungenziwa ngemali zinsiza. Kodwa, uma ziyazithanda ingadi futhi ube smallholding, qiniseka watshala kuso lesi sitshalo. Marshmallow kungokwalabo umndeni Malvaceae futhi sibukeka sisihle kokubili zokutshala olulodwa futhi edidayo. Ukufinyelela ukuphakama 1.5 amamitha kanye ukuqhakaza mnene pink izimbali, isitshalo engadini uyokhanga inani elikhulu lezinyosi bese ugcwalisa emoyeni nge iphunga elimnandi.
banakekelwe futhi eziningi ukunakwa, akudingi lwebhece. Engingakusho nje ulungiselela endaweni kokufika libalele nge inhlabathi evundile. Seeding kufanele kwenziwe maphakathi no-September. Ngaphambi betshala bathele imbewu ngosuku ngamanzi afudumele. Ukwenza anemifantu ka 1-2 cm ukujula, futhi imbewu abatshalwé ukulungele Turf wafafaza. Eyokuqala Kuphendula ungabukela ku 8-10 ngosuku. Kusukela ekuqaleni olandelayo engadini isizini podryhlite lwebhece kokwehla. Kodwa ukubukeka izithombo thinned wokuhlwanyela uqweqwe. Lesi sitshalo uthanda inkululeko futhi umhlaba okuxekethile. Njengoba ngakhula ensimini yase le mbali enhle, Kuyohlale ngezinto fresh okwelapha iluhlaza. A itiye leaf kuyoba omunye iziphuzo ozithandayo.
Izidakamizwa "Gerimaks Amandla": ukubuyekezwa kanye Umhlahlandlela
Quality udluliseleke: Imininingwane onobuhle